गरे के हुँदैन? कोरियामा चार बर्ष कमाएको पैसाले व्यवसायिक ड्रागन फ्रुटको खेती, करोडौ कमाइ – Eps Sathi
गरे के हुँदैन? कोरियामा चार बर्ष कमाएको पैसाले व्यवसायिक ड्रागन फ्रुटको खेती, करोडौ कमाइ
October 25, 2021 1156
बाग्लुङ । पछिल्लो समय अत्य’धिक बजार माग भएको ड्रागन फ्रुटको बागलुङमा समेत व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको छ। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–१ पाला करिनाका प्रतिमान थापाले वैदेशिक रोजगार पछि गाउँको बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती थालेका हुन्।
कोरियामा चार वर्ष बिताएका थापाले अहिले गाउँ फर्केर व्यावसायिक रुपमा ड्रागन फ्रुट खेतीमा लागेका छन्। थापाले आफ्नै गाउँठाउँमै श्रम गरेर व्यवसायी बन्ने उद्देश्यले अहिले १५ रोपनी जग्गामा फलफूल खेती सुरु गरेका छन्। उनले रु २० लाख लगानीमा केही बाँझो र केही कोदो र मकै उत्पादन हुने जग्गामा त्यसको बिरुवा रोपेका हुन्।
विदेशमा गर्ने दुः’ख गाउँमै गरे पनि राम्रो कमाइ गर्न सकिने भन्दै गाउँ आएर थापाले यो खेती सुरु गरेको बताउछन्। सुरुमा चितवनबाट एक हजार ५०० बिरुवा ल्याएर खेती सुरु गरेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा व्यावसायिक रुपमा कृषि गर्न सके विदेश जान नपर्ने उनी बताउँछन्। “सुरुमा लहलैमा लागेर विदेश गएँ, वास्तवमा विदेशमा गर्ने दुः’ख यहीँ गर्ने हो भने हामीले राम्रो कमाइ गर्न सकिन्छ”, थापाले भने, “गाउँमा आफ्नो जग्गा बाँझै राखेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु गलत रैछ, अहिले बल्ल चेत आयो, अब यहीँ व्यवसायी बन्ने लक्ष्य छ।” थापाले विदेश जानुभन्दा अगाडि तीन वर्ष शिक्षण पेसा गरेका थिए भने सात वर्ष लघुवित्तमा समेत काम गरेका थिए ।
“आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्ने सोच भएर नेपाल फर्किएँ तर यही गर्छु भन्ने मनमा थिएन्, नेपालमा केही नौ’लो गर्न मन लाग्यो, युटुयुबमा हेरे अहिलेसम्म नेपालमा सोचे जति ड्रागनको व्यावसायिक खेती भएको छैन र यस फलको बजारमा माग बढी रहेको थाहा पाएर आफ्नै गाउँमा खेती गर्न सुरु गरेको हुँ”, थापा भन्छन्। थापाले कोरियामा चार वर्ष कमाएको पैसा यो खेतीमा लगानी गरेको बताउछन्। थापालाई उनकी श्रीमती गोरीको पनि साथ मिलेको छ। थापाले बारीमा लगाएका ड्रागन अहिले ५ महिनाका भए।
अबको १५ महिनापछि यी विरुवाले फल दिन सुरु गर्ने उनी बताउछन्। थापाले बिरुवा लगाउने समयमा माटोको परीक्षण गरेका थिए। यो खेती एक हजार ५०० उचाइभन्दा तल राम्रो हुने गर्दछ । थापालाई यसको उत्पादन भएपछि बजारको अ’भाव नहुनेमा ढुक्क छन्। अहिले यसको बजार मूल्य प्रतिगोटा २०० देखि ३०० पर्ने थापाको भनाइ छ। यो फल खेतीका लागि अन्य बालीलाई जस्तो धेरै मेहनत गर्न नपर्ने र सुरुमा सिमेन्टको पोल बनाएर बिरुवा लगाई दिए राम्रोसँग सर्ने थापा बताउछन्। थापाले आगामी दिनमा ड्रागनसँगै अकबरे खुर्सानी खेती गर्ने सोचमा छन्।
Prevजापान पुन प्रवेश खुलाउनका लागि बिध्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताहरुको आग्रह
Nextजापानी राजकुमारीले आफ्नो प्रेमीसँग विवाह गर्न राजकिय पदवी नै त्यागिन।
कोरियामा एक जापानीले क्वा’रेनटीनमा बसेको होटलको झ्यालबाट फाले पैसा